Soomaaliya iyo xasuuqii Rwanda xalkiisa oo kale | shumis.net
Home » News » Wararka » Soomaaliya iyo xasuuqii Rwanda xalkiisa oo kale
Waxaa dhamaadkii bishii hore, 31/12/2015 lasoo afjaray maxkamadeyntii kuwii geystey xasuuqii Rwanda. Magaaladu waa Caruusha, Tanzania. Maxakamddan waxay socotay 21 sano. Xasuuqii dhacay 1994 ka dib, Qaramada Midoobey waxay sameysay maxkamad caalami ah (The International Criminal Tribunal for Rwanda).
Title: Soomaaliya iyo xasuuqii Rwanda xalkiisa oo kale